प्रदेश खबर – Page 310 – दाङ खबर
Jun182018 by DangkhabarNo Comments
दाङ, असार ४ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ को आयोजनामा सो वडाको लक्ष्मीपुर गाउँमा सञ्चालन गरिएको एक दिने महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी निःशुल्क शिविरबाट एक हजार बढीले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । स्थानीय महिला सञ्जाललगायत विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा गरिएको शिविरमा स्थानीय ८६ वर्षीया सीता चौधरीले खुलेर आफ्ना समस्या राख्न पाएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आफूलाई लामो समयदेखि पेट दुख्ने समस्या रहेको भन्दै आफ्नै घर आँगनमा डाक्टर आई आफूलाई निःशुल्क औषधिसमेत दिएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो । सो शिविरमा उहाँ जस्तै एक हजार सात जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएको स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. पुष्पा डाँगीले जानकारी दिनुभयो । शिविरमा उपचार गराएकामध्ये धेरैमा पाठेघरमा समस्या भएका महिला रहेको पनि डा. डाँगीले बताउनुभयो । त्यसैगरी सोही शिविरमा जेष्ठ नागरिकमा हातखुट्टा दुख्ने, दम खोकीलगायतका समस्य
टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुदा सास्ती भोग्दै रोल्पाली
रोल्पा, असार ४ । रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङबाहेकका अन्य स्थानमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । असिना पानी तथा चट्याङका कारण टावरमा आएको खराबीसँगै सेवा अवरुद्ध भएको बताइएको छ । पूर्वी रोल्पाको सातदोबाटोमा रहेको टावरमा लामो समयदेखि आएको समस्याका कारण पूर्वी रोल्पाका बासिन्दा सास्ती भोग्दै आएका छन् । सो टावरमा आएको समस्यासँगै पूर्वी रोल्पाका तीन वटा गाउँपालिका प्रभावित भएका छन् । सुनछहरी गाउँपालिकाको गाम, सिउरी र सेरममा पूरै सेवा अवरुद्ध छ भने अन्य वडा पनि आंशिक रुपमा प्रभावित भएका छन् । केही दिन अघि परेको चट्याङका कारण सिष्टम जलेपछि सेवा अवरुद्ध भएको टेलिकम रोल्पाले जनाएको छ । समस्या देखिएका टेलिफोन टावर मर्मतका लागि आफूहरुले अञ्चल कार्यालय तुल्सीपुरलाई जानकारी गराएको नेपाल टेलिकम रोल्पाका प्राविधिक प्रतापकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो । टावरमा ठूलो समस्या
जनप्रतिनिधिको उपहार : गाउँगाउँमा बाटो
दाङ असार ४ । घोराही उपमहानगरपालिकाको सवै भन्दा विकट क्षेत्र मानिने साविक सैघा गाविस, हाल वडा नम्वर १९ले करिव एक करोडको लागतमा गाउँमा सडक निर्माण गर्न लागेको छ । वडा नम्वर १९का वडा अध्यक्ष हर्क घर्तिमगरले दिएको जानकारी अनुसार यस आर्थिक बर्षमा घोराही सैघा जोड्नको लागि उक्त सडकको ट्याक खोल्न लागिएको हो । करिव ६ मिटर चौडा उक्त बाटोलाई यस बर्ष १४ किलोमिटरसम्म अगाडी बढाउने उनले बताए । घोराही उपमहानगरको पहाडी बस्ती सैघालाई पनि मोटर बाटो पुर्याउने उद्देश्य आफुहरुले घोराही उपमहानगरको आर्थिक सहयोगमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । अहिले उक्त सडकको ट्याक खोल्ने काम मात्रै भएको र आगामी बर्ष त्यसको स्तर उन्नती र पक्की सडक निर्माणको लागि आफुले प्रयास गर्ने वडा अध्यक्ष घर्तिले बताए । घोराही, मसिना देखि उत्तर पुर्व कटुवा खोला हुदै बन्न लागेको सडक निर्माण पछि वडा नम्बर १८को कटुवा खोला
दाङका सिमेन्ट उद्योग प्रभावितले भने-बालबच्चाहरुमा मानसिक समस्या देखिन थाल्यो
दाङ, असार ४ । स्थानीय र सोना सिमेन्ट बीच २०७३ सालमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रसासन कार्यालय दाङमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका वडानम्वर १३ र १६ का सिमेन्ट उद्योग पीडितहरुको डेलिगेसनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफूहरु र सिमेन्ट उद्योग बीच भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै माग पुरा गराउन आग्रह गरेका थिए । आफ्नै कार्यकक्षमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै श्रेष्ठले मापदण्ड पुरा गराउनका लागि आफूले कानुन अनुसार अग्रसरता लिने बचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो । ज्ञापनपत्रमा सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल्स प्रालिले (सोनापुर सिमेन्ट उद्योग दुधरास दाङ) बीच मिति २०७० साल मंसिर आठ गते र २०७३ साल चैत्र २९ गते कम्पनीले आफ्नै लगानीमा सैलुङ्ग टोल, बाँस टोल जोड्ने बाटो लाई पिच गर्ने, स्तरिय ग्राभेल गर्ने, पानी छर्कने, धुलो ध
Jun172018 by DangkhabarNo Comments
नेपालगन्जलाई नमूना शहर बनाउँछुः मन्त्री राई
नेपालगन्ज, असार ३-शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपालगन्जलाई नमूना शहर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । बाँके जिल्ला समन्वय समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा उहाँले नेपालगन्जको विद्युत् अनियमितताको समस्या पनि छिट्टै अन्त्य गर्ने, औद्योगिक विकासका पूर्वाधार बढाउँदै जाने र सार्वजनिकस्तरका भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका लागि सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो । मन्त्री राईको थप भनाइ थियो, “अब बाँके जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले पनि नागरिकलाई साथ लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ, त्यसो गरियो भने मात्र विकास र समृद्धिमा नेपालगन्ज अगाडि बढन सक्छ ।” कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसी, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तव, कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जुकुमारी थारु, पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष ठाक
जाजरकोट, असार ३- होटलको छतबाट लडेर आज तीन वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ । आठबीसकोट नगरपालिका रिटा घर भई सदरमुकामस्थित कान्तिपुर होटलमा फुपु सुशीला चन्दसँग बस्दै आएकी युपी चन्द होटलको बार्दलीबाट लडेर घाइते भएकी थिइन् । चन्द तीन तला माथिबाट खसेकी थिइन् । उनलाई उपचारका लागि नेपालगन्जतर्फ लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
पत्रकारिता संगसंगै व्यवसाय गर्दै पत्रकारहरु
तुलसीपुर, असार ३ । दाङका तीन जना पत्रकारहरुले व्यवसाय सुरु गरेका छन । पत्रकारहरु संगीत बस्याल र निरला अर्याल गैरेले पत्रकारिताको अलावा व्यापार पनि सुरु गरेका छन् । बस्याल र गैरेले आइतवार आ–आफ्नो व्यापारको एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरेका छन् । यसअघि नै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० का वडा सदस्य तथा पत्रकार सुवाश डिसीले पनि व्यापार सुरु गरिसकेका छन् । तुलसीपुरको सल्यान रोडमा गैरेले ‘ब्लसम बुटिक द फेसन प्याराडाइज’ सञ्चालनमा ल्याएकी छिन भने बस्यालले तुलसीपुरको ‘ग’ लाईनमा ‘संकेत डिजिटल प्रिन्ट’ आइतवारदेखि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । गैरेल करिव ४० लाखको लागतमा व्यापार सुरु गरेको बताएकी छन् भने बस्यालले झन्डै १० लाखको लागतमा व्यापार सुरु गरेको बताएका छन् । त्यस्तै पत्रकार तथा वडा सदस्य डिसीले तुलसीपुरको ‘क’लाई स्थित एउटा मार्केटमा ‘सिएस किड्स कलेक्सन’को पसल सञ्चालनमा ल्याएर छन् ।
तुलसीपुर, असार ३ । आइतवार दिनभर जसो तुलसीपुरमा भूमे पर्वको उल्लास रह्यो । जिल्ला भरका मगर समुदायका महिला तथा पुरुष, युवा युवती आफ्नै मौलिक भेष भुसामा सजिएर मेलामा आएका थिए । भूमे नाच नौं तालमा नाच्ने गरिन्छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ गणेशपुरमा मौलिक भेष भुषमा सजिएका मगर समुदायका युवा युवतीदेखि जेष्ट नागरिकसम्म भूमे पर्वको उल्लासमा रमाई रहेका देखिन्थे । प्रकृतिको पूजा स्वरुप मगर समुदायले यो पर्व एक महिना सम्म हर्षौउल्लास पूर्वक मनाउने गर्छन । जेठ १ गतेदेखि मनाउन सुरु भएको यो पर्व तुलसीपुर क्षेत्रमा भने आइतवार समापन भएको छ । तर घोराही क्षेत्रमा भने असार ५ गते मात्रै समापन गरिने भएको छ । बालिनाली सप्रियोस, रोगव्याधी नलागोस, बाढी पहिलो जस्ता प्राकृतिक विपत नमित्तियोस र मानविय क्षति नहोस भनेर मगर समुदायले भूमिको पूजा स्वरुप भूमे पर्व मनाउँदै आएको नेपाल मगर संघ राप्ती अञ्चल समन्वय
जव असहाय बालबालिकाले जुत्ता पाए…
तुलसीपुर, असार ३ । तुलसीपुर १८ बिजौरीमा रहको असहाय बाल बिकास नेपालले पालन पोषण गर्दै आएका बालबालिकाहरुलाई जुत्ता सहयोग गरिएको छ । साहारा बिहिन बनेका बालबालिकालाई शाहारा दिदै आएको असाहय बाल बिकास नेपालमा बस्दै आएका २० जना बालबालिकाहरुलाई जुता र मोजा सहयोग गरिएको हो । दाङ घर भई हाल साउथ कोरियामा रहेकी अम्बिका डाँगीको सहयोगमा बालबालिकाहरुलाई आईतबार जुत्ता हस्तान्तरण गरिएको हो । डाँगीले आउदा दिनमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी छिन् । डाँगीका आफन्त रमेश डाँगी, चन्दा डाँगी, ज्याति गुरुङ,जातक डाँगी, जातिका डाँगीले उक्त जुता हस्तान्तरण गरेका हुन् । साथै संस्थालाई सहयोग गरेको प्रति कोषाध्यक्ष सीमा वलीले धन्यवाद ब्यक्त गरिन् । आउदा दिन पनि असहाय बालबालिकाहरुको शिक्षा, दिक्षा, पालन, पोषणमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताईन् । सबैको सहयोगले नै सामाजिक कार्यमा हात हाल्ने प्रेरणा मिलेको अध्
सुर्खेत, असार ३- कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गर्ने अभियानलाई लक्ष्यबिन्दुमा पु¥याउने नीति लिएको छ । साक्षरताको हिसाबले ५८.२५ प्रतिशत रहेको विद्यमान अवस्थाबाट पूर्ण साक्षर कर्णाली प्रदेश बनाउन सरकारले यो नीति लिएको हो । देशकै औसत साक्षरता दर ६५.९५ प्रतिशत भइरहेका बेला कर्णालीको साक्षरता दर आठ प्रतिशतभन्दा तल छ । सरकारले यही कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएर नीतिगत लक्ष्यलाई सफल तुल्याउन अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य मोडालिटी तथा कार्यपद्धति निर्माणगरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले रु दुई करोड बजेटको विनियोजन गरेको छ । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ,